LEAGOO T5C ကိုရယူပြီးမိမိကိုယ်ကိုဒေါ်လာ ၃၃ ကျော်သိမ်းဆည်းပါ !! | Androidsis
LEAGOO T5C ကိုရယူပြီးမိမိကိုယ်ကိုဒေါ်လာ ၃၃ ကျော်သိမ်းဆည်းပါ !!
ဒီခရစ္စမတ်ပွဲမှာသင်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေးကောင်း / စျေးနှုန်းနဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လျှော့ချထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်၊ သင်ဒီမှာ aliexpress တွင်ဝယ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်မြန်မြန်ပဲကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်အတွက်။
LEAGOO မှ Aliexpress စာမျက်နှာတွင်ကြိုတင်ရောင်းရန်အတွက်ဤခွင့်မပြုသည့်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်နေသည်နှင့် 33.8 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးကိုချွတ် $ 26 အထိကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်။ ကျနော်တို့ T5C အကြောင်းပြောဆို!
LEAGOO T5C သည် Spreadtrum SC9853I ပရိုဆက်ဆာကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် 14-nanometer X86 Airmont ဗိသုကာ၏။ ဤနည်းပညာသည်အခြားပရိုဆက်ဆာများထက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးစေရန်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ T5C တွင်ပိုမိုကြာရှည်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးပြီး၎င်းကိုပိုမိုရရှိရန်အတွက်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု၏ ၃၀% အထိကိုချွေတာသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီရှစ် core 64-bit SoC သည် ၁.၈GHz အမြန်နှုန်းကိုရရှိသည် ဂရပ်ဖစ်အထူးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုလည်ပတ်သည့်အခါအလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပြုလုပ်ထားသော Intel FinFET ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ယခင်မျိုးဆက် SoCs နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၅% အထိကွဲပြားနိုင်သည်။
ဒီပရိုဆက်ဆာရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ၊ Mali-T820 GPU၊ 3GB Samsung RAM၊ 32GB Sandisk ROM ကိုတွေ့တယ် 32GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့် 3.000mAh LG ဘက်ထရီတို့ဖြင့်သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏဖြစ်သည်။
တရားဝင် Hans-on ဗီဒီယိုတွင် LEAGOO T5C ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသောဤကိရိယာ၏ Antutu ရမှတ်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
1 Spreadtrum နည်းပညာနှင့်အတူတစ် ဦး ကကင်မရာ
2 T9853C ၏ Spreadtrum SC5I သည် Mediatek MTK6750 သို့မဟုတ် Kirin 970 ကိုမနာလိုမဖြစ်
3 အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်များကို LEAGOO T5C မျက်နှာပြင်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ
5 LEAGOO T5C သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အတူတစ် ဦး ကကင်မရာ Spreadtrum နည်းပညာ
LEAGOO T5C တွင် 13 Flash + OV 2MP နောက်ကင်မရာနှင့် LED Flash ပါ ၀ င်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုထောက်ပံ့ပေးသောနောက်ဆုံးမြေအနက်မြေပုံနည်းပညာဖြင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်များနှင့်ရှေ့တန်းနှင့်နောက်ခံဓာတ်ပုံများကိုရရှိသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤမြင့်မားသော SNR ကင်မရာသည်ဆန်းသစ်တီထွင်သောပုံရိပ် algorithm ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတောက်ပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေးတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 5MP OV ရှေ့ကင်မရာလည်းပါဝင်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊
ဤတွင် T5C ကင်မရာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
T9853C ၏ Spreadtrum SC5I သည် Mediatek MTK6750 သို့မဟုတ် Kirin 970 ကိုမနာလိုမဖြစ်
Mediatek MTK6750 chipset နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Spreadtrum သည်၎င်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်သာလွန်သည်။
SC9853I စွမ်းဆောင်ရည်သည်သာလွန်သည် အသီးသီးသည် ၂၅%၊ ၃၆% နှင့် ၃၉% တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Huawei Mate 970 တွင်တွေ့ရသည့် Kirin 10 နှင့် ပတ်သက်၍ Spreadtrum SC9853I သည်အနည်းငယ်မျှသာအောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းစျေးနှုန်းအချိုးသို့ယူပါက Spreadtrum သည်မည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိဘဲကျော်လွန်သွားသည်။
အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်များကို LEAGOO T5C မျက်နှာပြင်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ
ဤ terminal တွင် ၅.၅ လက်မ IPS FullHD မျက်နှာပြင်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် High-Graphic ဂိမ်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသရန်နှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေးအပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပြီးတော့အဲဒါမလုံလောက်သေးဘူးလား ဒီ 2.5D ဖန်ခွက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအနားစွန်းမှာပိုကောင်းသောဆံပင်ကောက်ကောက်တစ်ခုပေးသည်။
ဤဖုန်းသည်ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်၀.၁ စက္ကန့်အတွင်းမိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်0.1ºအသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများကိုတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အားအထူးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည်ဟုကတိပေးသည်။
LEAGOO T5C သတ်မှတ်ချက်များ
မျက်နှာပြင် ၅.၅ လက်မ SHARP FHD IPS
လုပ်ငန်းစဉ် Spreadtrum SC9853 1.8Ghz Intel X86 ရှစ် core 64bit
GPU ကို မာလီ-T820
ရမ် Samsung 3GB
ချမ်ဘာ Dual ကင်မရာ Samsung 13.0MP + OV 2.0MP
ရှေ့ကင်မရာ OV 5.0MP
ဘက်ထရီ LG 3.000mAh 5V2A Fast Charge
သိုလှောင် Sandisk 32GB
လက်ညှိုးဖတ်ဖတ် 360 °အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူ
မူရင်းစျေးနှုန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉
ဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉ ထက်ဒေါ်လာ ၉၆.၁၉ ဖြင့်ဝယ်ယူပြီးဒေါ်လာ ၃၃.၈ အထိသိမ်းဆည်းပါ။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အခွင့်ကောင်းယူသည်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LEAGOO T5C ကိုရယူပြီးမိမိကိုယ်ကိုဒေါ်လာ ၃၃ ကျော်သိမ်းဆည်းပါ !!
နေရာကောင်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ငါတကယ်ဤကဲ့သို့သောအင်ဖိုကိုချစ်!
အာရုန်သည် Rivas ဟုသူကပြောသည်
Aaron Rivas အားပြန်ပြောပါ
Snapdragon 670: Qualcomm ရဲ့ mid-range processor အသစ်
OnePlus5သည် Android Oreo ကိုမျက်နှာဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်စတင်ရရှိသည်